Haweeney Kenyaati Ah Oo Dhimatay Kadib Markii Loo Keenay Meydka Wiilkeeda Oo Sarkaal Ahaa.
Sunday August 27, 2017 - 11:19:11 in Wararka by Super Admin
Konistaybol Bareyn Malasi oo ah Sarkaal ka tirsan Police-ka Kenya oo maalma ka hor lagu dilay weerar ay ciidamada Alshabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Garissa ayaa lagu aasay deegaanka uu ka soo jeedo ee Nigeeti.
Malasi wuxuu ciidamada Police-ka ku soo biiray sanadkii 2015-ka, Wuxuuna tababar ku soo qaatay kuliyadda ciidamada Police-ka ee Kiganjo, iyadoo ugu dambeyntii loo soo wareejiyey saldhigga Police-ka Bodhaay ee gobolka Garissa halkaas oo uu ka tirsanaa ilaa ugu dambeyntii uu ku baxay gacanta Xarakada Al Shabaab.
Sarkaalkan iyo shan kale oo saaxiibadiisa ah ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo 15-kii August ee sanadkan ay Mujaahidiintu ka fuliyeen wadada isku xirta Boodhaay iyo Ijara ee gobolka Garissa.
Hal Askari oo kaliya ayaa ka bad-baaday weerarkaas sida ay sheegeen Saraakiil u hadashay Police-ka Kenya, waxaana sidoo kale lagu burburiyey gaari ay ciidanku wateen.
Taliyaha ciidamada Police-ka ee gobolka Garissa David Karina ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay wateen gaari Land Cruiser ah xilligii la weerarayey, ayna ku dhaceen weerar kamiin ah.
Taliyahan ayaa sheegay in Meydka sarkaalkan ay ku wareejiyeen reerkiisa balse wuxuu sheegay in uu la kulmay arrin kale oo fajaciso ah.
Wuxuu tilmaamay in hooyada dhashay Sarkaalkan ay shoogtay, horayna ka geeriyootay markii ay aragtay meydadka wiilkeeda taas oo ku noqotay arrin kale oo musiibo ah.
"Waan argagaxay markii la igu soo wargeliyey in ay dhimatay hooyada dhashay sarkaalka la dilay oo aan waxyar ka hor isla abaabulaynay aaskii loo sameyn lahaa Sarkaalka" ayuu yiri taliyaha.
Durbaba markii ay indhaha saartay meydka wiilkeeda horay ayey ka argagaxday, weyna geeriyootay” ayuu yiri taliyaha ciidamada Police-ka ee gobolka.
Warbaahinta Kenya waxay sheegaan in ku dhawaad 50 askari oo ka tirsan ciidamada dowlada Kenya lagu dilay qaraxyada iyo weerarada dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay xoogaga Al Shabaab ka fuliyeen gobollada xeebta iyo NFD ee ku hoos jira gumeysiga dowlada Kenya.
Sarkaal Katirsanaa Ciidamada ilaalada Waddooyinka oo Lagu Dilay Degmada Shibis.